in အားကစား — October 5, 2020
အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၂၀
မှားယွင်းသည့်သမိုင်းကို ရေးခဲ့မိပြီဟု ကလော့ပ်ပြော
လီဗာပူးလ်ဟာ မှားယွင်းတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကို ရေးထိုးလိုက်မိပြီလို့ နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ မနှစ်က ဖေဖော်ဝါရီလရောက်မှ ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်ဟာ ရာသီသစ်ရဲ့ ၄ ပွဲမြောက်ဖြစ်တဲ့ မနေ့မှာ အက်စတွန်ဗီလာကို ၇ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
ကလော့ပ်ကတော့ ဦးဆောင်ဂိုး ပေးလိုက်ရပြီးကတည်းက အသင်းဟာ အခြေပျက်သွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အမှားတွေ ဆက်တိုက်လုပ်မိခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားကို စာနာနေတဲ့ မော်ရင်ဟို
Soccer Football – Premier League – Manchester United v Tottenham Hotspur – Old Trafford, Manchester, Britain – October 4, 2020 Manchester United manager Ole Gunnar Solskjær with Tottenham Hotspur manager Jose Mourinho after the match Pool via REUTERS/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
မနေ့ကပွဲမှာ အသင်းရဲ့ ကစားပုံဟာ အင်မတန်ချီးကျူးစရာကောင်းခဲ့ပြီး ညဘက် အိပ်ပျော်မှာမဟုတ်တဲ့ ပြိုင်ဘက်အသင်း နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားရဲ့အခြေအနေကို စာနာသနားမိတယ်လို့ စပါးနည်းပြ မော်ရင်ဟိုက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
စပါးဟာ မနေ့က မန်ယူကို ၆ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။ ၂၈ မိနစ်မှာ မန်ယူက တစ်ယောက်လျော့သွားပေမယ့် ဒီအရင်ကတည်းက မိမိတို့ဟာ ကစားပုံအသာနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာလို့ မော်ရင်ဟိုက ဆိုပါတယ်။
မနေ့ကပွဲဟာ အသင်း၊ အသင်းသားတွေနဲ့ သူ့အတွက် သမိုင်းဝင်နိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး အိုးထရက်ဖို့မှာ ချယ်ဆီး၊ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းတွေနဲ့လည်း မန်ယူကို အနိုင်ယူဖူးတယ်လို့ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မနေ့က စပါးနဲ့ပွဲဟာ မိမိသက်တမ်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံး ရှုံးနိမ့်မှု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုးလ်ရှားက ဖွင့်ဟပါတယ်။
ကိုဗစ်ကြောင့် နာပိုလီအသင်း ၃ ဂိုးပြတ်အရှုံးပေးရဖွယ်ရှိနေ
ကစားသမား ၂ ဦး ကိုဗစ်ကူးစက်နေတဲ့ နာပိုလီအသင်း ရောက်မလာတာကြောင့် မနေ့ကစားမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ နာပိုလီတို့ရဲ့ စီးရီးအေပွဲစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။
ဒေသရဲ့ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်က နာပိုလီတစ်သင်းလုံး ခရီးမသွားဖို့ အမိန့်ထုတ်လိုက်တာပါ။ အီတလီ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဲ့ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွေ သဘောတူညီချက်အရ ပိုးမရှိတဲ့ ကစားသမား အနည်းဆုံး ၁၃ ဦးရှိရင် ကစားပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ ကစားသမား ၁၀ ဦး ပိုးရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ပွဲကို ပြန်ကစားခွင့် တောင်းဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးရီးအေစည်းကမ်းအရ မနေ့ကအဖြစ်အပျက်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ၃ ဂိုး ပြတ်နဲ့ အနိုင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားရေးရာ တရားသူကြီးရဲ့ မနက်ဖြန်ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ပြီး လိုအပ်သလို တုန့်ပြန်သွားမယ်လို့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Tags: EPL2020-21, Man U, Napoli, SerieA2020-21